ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ပြင်သစ်ဘောလုံးကစားသမား Olivier Giroud ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; "Charm တိုက်စစ်မှူး"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Olivier Giroud ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ကိုမှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏အကောင့်တတ်၏။ analysis ကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြား OFF နှင့် on-အသံနည်းနည်းလူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, တိုင်းမိမိအရည်အချင်းများအကြောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Olivier Giroud အတ္ထုပ္ပတ္တိအတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သောသတ်မှတ်ထားသည်။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမပါဘဲ, Begin ပေးနိုင်ပါတယ်။
Olivier Giroud ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
Olivier Giroud တောင်ဘက်-အရှေ့ပိုင်းပြင်သစ်, Chambéryအတွက်စက်တင်ဘာလ 30 ၏ 1986th နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။
(ညာအသက်6မှ) သူ့ရဲ့ကလေးဘဝကတည်းကသူကသူ့အကြီးတန်း 10 နှစ်ပေါင်းသူလည်းမိမိအကြီးအကဲတစ်ဦးချင်းငါ့ညီ, Romain Giroud မှဘောလုံးကျေးဇူးတင်စကားအကြောင်းကိုအသည်းအသန်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
Olivier ပင်သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမစတင်မီပျက်ကွက်၏စိုးရိမ်မှုနှင့်အတူလွှမ်းခဲ့သည်။ သူကသူ့အစ်ကိုရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခုရုတ်တရက်အဆုံးမြင်သည်အတိုင်းဤသည်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သူ့အစ်ကို့အာဟာရဖြစ်လာဖို့ဘောလုံးဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အကောင်းတစ်ဦးစံနမူနာပျက်ကွက်အဖြစ်ရောမသည်သူ၏မိဘများစိတ်ပျက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အပြင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစိုးရိမ်မှုတွေကနေနည်းနည်း Olivier လည်း 1980s ဟာသဇာတ်ကောင်များ၏ကြောက်ခဲ့ '' Alf '' သူဟာလူငယ်အခါ။ သူဟာတစ်ချိန်ကသည်သူ၏အစ်ကိုမှန်မှန်အများကြီး-ကိုခစျြဟာသဇာတ်လမ်းမှာကြယ်ပွင့်ကသူ့ကွောကျရှံ့သောအကြောင်းသူ့ကိုကဲ့ရဲ့ဖို့အသုံးပြုဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်။
Alf ရဲ့ဖော်ရွေပုံနေသော်လည်းငယ်ရွယ် Olivier သတ္တဝါရဲ့ဂရုစိုက်တတ်တဲ့သဘာဝကိုစိတ်ဝင်စား was't ။
သူအများဆုံးကြောက်အရာအကြောင်းကိုမေးသောအခါ, Giroud said: '' ကျွန်တော့်အစ်ကို Alf လို့ခေါ်တဲ့ကလေးတွေတီဗီဇာတ်ကောင်တွေအကြောင်းငါ့ကိုမာရ်နတ်ရန်အသုံးပြုတယ်ခဲ့သည်။ သူကဒါကြောင့်အရုပ်ဆိုးသောကြောင့်သူ့ကိုငါဤမျှကြောက်လန့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့အစ်ကိုသတိထားပါ, ပြောအသုံးပြု Alf သင်သည်ယနေ့ညရဖို့သွား! ' သူကဝေးလွန်းသည် သွား. !
အများကြီးစိတ်ခွန်အားနိုးအကြံဉာဏ်ကိုပွီးနောကျ, ငယ်ရွယ် Olivier ဘောလုံးကွင်းတစ်ဦးပါပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုသူတစ်ချိန်ကမှတ်ခဲ့သည့်နောက်ကျောကသူ့အိမ်သူအိမ်သားစကိုဆုံးရှုံးဘုန်းအသရေကိုရောက်စေဖို့ inorder လုပ်ခဲ့တယ် "ဘောလုံးသမားတစ်မိသားစု"
Olivier Giroud ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အနှစ်ချုပ်အတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး
Olivier Giroud Grenoble နီးစပ်သူ Froges ၏အနီးအနားရွာ၌ကြီးပြင်းခဲ့ရသည်။ သူကသူ့ဇာတိမြို့ကလပ်, Olympique ကလပ်က de Froges အဘို့ကစားသည်သူ၏ဘောလုံးစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
Olivier Giroud အလုပ်ရှာဖွေရေး Start ကို
သူ 13 ၏အသက်အရွယ်မှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကလပ် Grenoble မဝင်ခင်ကလပ်မှာခြောက်နှစ်လေ့ကျင့်ရေးနေခဲ့ရသည်။
မိမိအကလပ်ကရောင်းဖို့သူ့ကိုတက်ထားသည့်အခါ Romain မှဖြစ်ပျက်ကိုမျက်မြင်ဘဲလျက်, တတိယဆင့်အတွက် Istres မှချေးငွေအပေါ်ကိုစေလွှတ်ခဲ့ပြီး, ကသူအထက်တန်းလွှာနှင့်အတူဆော့ကစားရန်အရညျအသှေးမတျောသညျအတော်လေးတစ်ခေါက်ပြန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Olivier Giroud ဒီကအရမ်းကြောက်ခဲ့တယ်။ သူ၏စကားအတွက် ... ။ "ကျွန်မနေတဲ့အနိမ့်လိဂ်အတွက်ပြန်လည်စတင်ရန်တစ်ဦးစွန့်စားယူရတယ်" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "ဒါပေမယ့်ငါအပ်ဘူး။ "
Olivier သည်မိမိခံရသောဝဒေနာနှုတ်ဆက်ပြီးနှင့်သူ၏မာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏အစိတ်အပိုင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူက excel မှမိမိကိုမိမိတွန်း။
သူကနောက်ပိုင်းမှာ 2008 အတွက် Tours မှဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ Tours မှမှာသူ၏ဒုတိယရာသီမှာတော့သူဟာ 21 ရည်မှန်းချက်များနှင့်အတူဌာနခွဲရဲ့ထိပ်တန်းဂိုးသွင်းခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကိုထိပ်တန်းလေယာဉ်ဘက် Montpellier တစ်ဦးပြောင်းရွှေ့ဝင်ငွေ။
Young က Olivier Giroud- အလုပ်ရှာဖွေရေးပုံပြင်
Giroud အာဆင်နယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမပြုမီကလပ်ဟာသူတို့ရဲ့အစဉ်အဆက်ပထမဦးဆုံးအလီဂူး 21 ခေါင်းစဉ်ပေးခြင်း, ထပ် 2011-12 ရာသီအတွက် 1 ရည်မှန်းချက်များနှင့်အတူထိပ်တန်းဂိုးသွင်းခဲ့ပါတယ်။ သူတို့သည်အစဉ်မပြတ်တောင်းသည်အတိုင်းအရာကြွင်းလေ, သူတို့ရဲ့ manify အိမ်သူအိမ်သား hosory ရှိခဲ့ပါတယ်။
Olivier Giroud ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိသားစုဘဝ
အစီရင်ခံစာများ Olivier Giroud ပျမ်းမျှမိသားစုနောက်ခံကနေလာထင်ရှားပါပြီ။ သူတို့လုံးဝပျောက်မီဒီယာကနေဆက်နေရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီအဖြစ် Little ကသူ့ဖခင်နှင့်မိခင်အကြောင်းကိုလူသိများသည်။
အစ်ကို: အစောပိုင်းကဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Olivier လည်းဘောလုံးသမားသူတစ်ဦးအစ်ကို Romain ရှိပါတယ်။ သူက Auxerre အကယ်ဒမီမှာကစားနှင့် 15-အောက်, အောက် 17 အဆင့်မှာပြင်သစ်ကိုကိုယ်စားပြုကဲ့သို့သောကစားသမားများနှင့်အတူ သီယာရီအွန်နရီ, ဒါဝိဒ်သည် Trezeguet နှင့် က Nicolas Anelkaဒါပေမယ့်လေ့လာပြီးအာဟာရဖြစ်လာမယ့်အလားအလာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားဘကျဆင်းနေတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
Olivier ပြန်ပြောပြသည်။ "သူက Auxerre မှာလေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သူတစ်ဦးမျှော်လင့်ချက်ခဲ့ပေမယ့်သူတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားဘမရှိခဲ့ဘူး" ။ Romain ပြန်လေ့လာနေဖို့ သွား. , တစ်ဦးအာဟာရဖြစ်လာခဲ့သည်။
Olivier Giroud ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
Giroud ဂျနီဖာမှလက်ထပ်ခဲ့ပြီး 2011 ကတည်းက။
Olivier Giroud နှင့်ဇနီးဂျနီဖာ
သူတို့ရဲ့သမီးကျောက်စိမ်းဇွန်လ 18, 2013 ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။
Olivier ရဲ့သမီး, ကျောက်စိမ်း Giroud ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ခက်ခဲမိဘအုပ်ထိန်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်သူ၏အဖေတို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။ ကလေးများကိုအသုံးပြုဖို့ဘယ်တော့မှသူ Olivier Giroud သည်သူ၏မွေးကင်းစကလေးသူငယ်၏, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, လူမှုရေးနှင့်အသိပညာဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးမြှင့်တင်ရန်နှင့်ထောက်ပံ့ဖို့ပိုအချိန်ဖန်တီးခဲ့ကြရသည်။
နိုဝင်ဘာလ 2015, Olivier နှင့်ဂျနီဖာ Giroud အတွက်လန်ဒန်မြို့တွင်ဂလိုဘယ်လက်ဆောင်ပေးမယ် Gala ၏အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်ဂျနီဖာရဲ့ကိုယ်ဝန်တရားဝင်။ မတ်လ 7, 2016 တွင်, ဂျနီဖာအီဗန်အမည်ရှိကလေးယောက်ျားလေးမှမွေးဖွားပေးသည်။ Giroud သူဤမျှဆုမွန်ကောင်းသောမိမိသား, အီဗန်အားမိမိရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုသန့်ရှင်း။
အောက်တိုဘာလ 2017 ခုနှစ်တွင်ကဲ့သို့စုံတွဲတစ်တတိယကလေးကမျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်။
Olivier Giroud ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ထိ မိ. လဲစရာ
ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးအရှုပ်တော်ပုံဟာ Olivier Giroud ရဲ့ image ကို ထပ်မံ. ။ ဒါဟာအင်္ဂလိပ်နေ့စဉ်သတင်းစာအတွက်အလျှော့ဓါတ်ပုံများ၏ထုတ်ဝေရန်ကပါဝင်ပတ်သက် the Sun။ ဤပုံသည် Olivier Giroud နဲ့စဲလ်လီကေးတစ်ဦးအတွင်းခံမော်ဒယ်အကြားတစ်ဦး extramarital ကြားဆက်ဆံရေးဖော်ပြသည်။
ထိုနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 ခုနှစ်, Giroud သတင်းများအရသူကမော်ဒယ်စဲလ်လီကေးနှင့်အတူသူ၏ဇနီးအပေါ်လိမ်လည်လှည့်ဝန်ခံခဲ့သည်။
အဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်သူသည်မိမိဇနီးမှတစ်ဦးတောင်းပန်ထုတ်ပေးပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာသူဟာအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ကျူးလွန်ဘူးကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်။ ဝင်းဂါးကသူလိုခဲ့ဟုဒီကိစ္စကိုအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်မပြုခဲ့ "သူ၏ privacy ကိုလေးစား" ။
Raheem Sterling, Edinson ကာဗာနီ နှင့် အန်သိုနီစစ်အုပ်ချုပ်ရေး ရုံ Olivier တူသောအရှုပ်တော်ပုံလိမ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။
Olivier Giroud ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -လှပသော
Giroud အတွက်ဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ် ပြင်သစ် တစ်ဦး likeable နှင့်ချောမောဇာတ်ကောင်ဖြစ်ခြင်းသည်။ 2014 ခုနှစ်တွင်သူသည်၏မျက်နှာကိုဖြစ်လာခဲ့သည် Hugo Boss's သူဌေးကပုလင်း ယောက်ျားရဲ့အမွှေးအကြိုင်။
ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 Giroud အတွက် '' အမိုက်ဆုံးစားပွဲထိုးပရီးမီးယားလိဂ် Player ကို '' မဲပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နှင့်အင်တာဗျူးတွင် GQသူကိုးကား ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်း သူကဘက်ခမ်းရဲ့ဟူမူကား, ကြည့်သည်လမ်းတစ်ခုလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ် "စတိုင်အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်" ။
Olivier Giroud ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘာသာ
Giroud ဟာကက်သလစ်သည်နှင့်လက်တင်အတွက်ဆာလံ 23 ကနေလက်ျာလက်ရုံးတော်ပေါ်မှာတက်တူးထိုးထားပါတယ်: "Dominus et nihil mihi deerit ငါ့ကို regit" ( "ထာဝရဘုရားသညျငါ၏သိုးထိန်းသည် ဖြစ်. , ငါမလိုချင်ရကြလိမ့်မည်") ။
သူကတစ်ဦးကဲ့သို့မိမိကိုမိမိဖော်ပြထားတယ် "အလွန်ယုံကြည်သူတစ်ဦး [ ... ] ငါသည်ငါ့ဂိမ်းမတိုင်မီကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြတ်ကူးကြဘူးပေမယ့်ငါငါ့နှလုံး၌အနည်းငယ်ဆုတောင်းပဌနာပြုပါ"
Olivier Giroud ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -Koscielny နှင့်အတူ Bromance
Giroud နှင့် Koscielny ဟာ 2008-09 ရာသီအတွက် Tours မှ FC အသင်းအတွက်အသင်းဖော်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဟာတစ်သင်းလုံးကကစားသမားခန်းထဲမှာအတူတူအမြဲဖြစ်ကြောင်းထားတဲ့ကျွန်မတို့ဟာခွဲလို့မရတဲ့စုံတွဲ, ဘတ်စ်ကား, အဖွဲ့ကဓာတ်ပုံများ, သင်တန်း, တင်းနစ်နှင့်ပင်ညစာစားဖြစ်တယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းအားမိမိအပြောင်းအရွေ့လုံခြုံရေးပြီးနောက်, Giroud အာဆင်နယ်တို့သည်ကြီးစွာသောပြင်သစ်နည်းပြနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်ကလပ်ကြောင်းဖော်ပြထား, သူ၏ bro "LoLo" အရမ်းအဲဒီမှာကစားနေသည်။
Koscielny ကိုလည်းဟုခေါ်သည် "Bosscielny" or "Kos သူဌေးက" သူ့အဖွဲ့အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ပရိသတ်တွေအကြား။
Olivier Giroud ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -Play ကို၏စတိုင်
Giroud အများအပြားထိုးစစ်ရာထူးအတွက်ကစားနိုင်စွမ်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တစ်ဦးတိုက်စစ်မှူးအဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်စင်တာ-ရှေ့ဆက်အဖြစ်ပါဝင်သည်။ သူလည်းရံဖန်ရံခါဒုတိယတိုက်စစ်မှုးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးက Hard-အလုပ်လုပ်တိုက်စစ်မှုး, မိမိယုံကြည်စိတ်ချရသောရည်မှန်းချက်အမှတ်ပေးမှုနှုန်း, အရွယ်အစား, အစွမ်းသတ္တိကိုဦးတည်တိကျမှန်ကန်မှု, အစွမ်းထက်ရိုက်ချက်, ပန်းတိုင်ကသူ့နောက်ကျောနှင့်အတူဘောလုံးတက်ကိုင်နိုင်စွမ်းနှင့် link ကို-up, ပြဇာတ်များအတွက်အထူးသဖြင့်လူသိများသည်။ သူလည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက် outwit သောရှေ့ post မှပြေးအောင်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်
Olivier Giroud ရဲ့ '' မယုံနိုင်စရာကငျးမွီးကောကန် '' အဆိုပါများအတွက်ပြိုင်ဘက်ခဲ့သည် အဆိုပါ 2016 / 2017 ရာသီ၏ရည်မှန်းချက်။
သငျသညျနံပါတ်များအားဖြင့် Giroud ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြန်လည်သုံးသပ်လျှင်, သင် Giroud ကိုမဆိုအလေးအနက်ဒဏ်ရာ lay-off မရှိဘဲမိမိအယခင်ကလပ်အသင်းအတွက်တသမတ်တည်းကစားခဲ့သည်ထွက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ၏ DNA ကိုရှိသည်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ် Park Ji-Sung, Dirk Kuyt နှင့်နွား (တိရစ္ဆာန်, မ Oxlade-Chamberlain) ထိုသို့သောကြံ့ခိုင်ရေးအဆင့်ဆင့်အတူတက်ထားရန်။
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ပြင်သစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Giroud 2012 အတွက်ဂန်းနားပူးပေါင်းကတည်းကအကြိုက်ဆုံးတစ်ပရိတ်သတ်တွေဖြစ်လာသည်။ ပရိသတ်တွေအများကြီးကသူ့ဆံပင်စတိုင်လ်ကိုတုပထားသည်။ တချို့ကအောက်ကဆိတ်သငယ်နှင့်တူဒုက္ခသို့ဆည်းပူးခဲ့သည်။
သူကအာဆင်နယ်အသင်းကြယ်ပွင့် Olivier Giroud ကဲ့သို့သူ၏ဆံပင်ညှပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုးနှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုတစ်ကြိမ်စာသင်ခန်းကနေပိတ်ပင်ထားခံခဲ့ရသည်။
မိမိအ mum, စာရာလုံးဝ, လေတန်သိမ်းငယ်, Bedfordshire အတွက် Brooklands အလယျပိုငျး School မှသူ့ကိုဆုတ်ခွာဖို့ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမေ-of နှစ်ခုစာရာ 33, အတန်းဖြေရှင်းပြီးသည်အထိသူမအိမ်မှဒန်နီကျူရှင်နိုင်အောင်ပစ္စည်းများများအတွက်ကျောင်းမမေးခဲ့ကြရသည်။
သူမသည် said: "ကျနော်တို့ကစစ်မှန်စွာဒန်နီကဲ့သို့ဆံပင်ညှပ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုခြိုးဖောကျခဲ့သညျမထင်ခဲ့ပေ။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသားသမီးတို့မှန်ကန်စွာသူတို့ကျောင်းယူနီဖောင်းဝတ်ဆင်နှင့်ကျောင်းမှာကွိုးစားအားထုအဖြစ်, ငါတကယ်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတာကိုမမွငျပါဘူး။ ငါအရှိဆုံးဆက်ဆက်အနားမှာရပ်နေနှင့်သူတို့ကိုငါ့အသားတစ်ဦးအပယ်ခံများကဲ့သို့ခံစားမိစေပါနှင့်သင်ခန်းစာများအနေဖြင့်သူ့ကိုထုတ်ပယ်မကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်နှင့်အတူထင်နှင့်မကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆံပင်, ဒါပေမယ့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပေးစဉ်းစားမိတယ်။ "
သို့သော် headteacher စတီဗင် Harrington-Williams ကကျောင်းရဲ့ရပ်တည်ချက်ခုခံကာကွယ်ခဲ့သည်။ ဟုသူကဆိုသည်: "ဘာဖြစ်ပျက်ခဲ့သူ Olivier Giroud နဲ့တူရိတ်သည်သူ၏ဆံပင်၏ကြီးမားသောအဘို့နှင့်အတူကျောင်းကသို့ကြွတော်မူခဲ့သည်။ ကြွင်းသောအရာရှည်လျားခဲ့စဉ်ဒါဟာနီးပါးဦးရေပြားဖို့ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ကျောင်းမှာဆံပင်ညှပ်၏မျိုးကိုမျှော်လင့်ကြဘူး။ "
ဒန်နီဤသို့နောက်ပိုင်းမှာမိမိအ Olivier Giroud ဆံပင်စတိုင်နှင့်ကျောင်းကလေးတွေများအတွက်ဆံပင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအပေါ်သင်ခန်းစာ session ကိုချွတ် shaving ပြီးနောက်ပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Wissam ဘင် Yedder ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
သောမတ်စ် Lemar ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်